बाबुराम र उपेन्द्रको एकतापछि नेपालमा अमेरिका र भारत सत्ता समीकरणको नजिक पुगेका हुन् ?
‘हकवाला’ अमेरिकाले आफूलाई दाबी गरे पनि ‘चकवाला’ भारतले अमेरिकालाई केही चर्कै पेलेकै छ ।
-- कुमार शाह
देशमा वैकल्पिक संसदीय राजनीतिक पार्टी निर्माणमा लागेका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण भई समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण भएको छ । पछिल्लो चरणमा माओवादी शब्दावली नै परित्याग गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र मधेश आन्दोलन र मधेशवादी दलबाट फोरममा उक्लिएका उपेन्द्र यादवले पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो संसदीय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर पुँजीवादी समाजवाद ल्याउने सपना देख्दै गर्दा प्रतिपक्षी पार्टी नै समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण भइसकेपछि ओलीदाहाल चुकचुकाएका छन् । नेकपा भन्नेले भन्दा समाजवादी भन्नेले धेरै भ्रम पार्ने र उस्तै परे अर्को सत्ता समीकरणको प्रारम्भ पो हो कि भनेर निकै तुलबुल गर्न थालेका छन् ।
ओली दाहालले सोचेका र तर्सिएका यी कुराहरु सत्यताका नजिक नजिक पनि पुग्दै गइरहेका छन् । पूर्व एमालेमाकेले धुम्बाराहीमा बसेर देशभर नेकपा पार्टी एकताको विवादित नामावली सार्वजनिक गरेर आत्मतुष्टी लिंदै गर्दा त्यो भन्दा केही बढी प्रजातान्त्रिक तरीकाबाट समाजवादी पार्टी निर्माण भएपछि ओलीदाहालको सिण्डिकेटको दोहोलो उनकै कार्यकर्ताहरुले काढ्ने भएका छन् ।
उता भर्खरै निर्मित समाजवादी पार्टीमा बाबुराम सरकारमा जान लागे कि उपेन्द्र प्रतिपक्षमा आउन खोजे भनी चर्चा चलिरहेको छ । तर यसको सही जवाफ भने अध्यक्ष द्वय भट्टराई र यादवले दिएका छैनन् । ओली–दाहाल भने आफ््नै पार्टी फुटेर भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार पो गठन हुने हो कि भनी तिर्मिराउन थालेका छन् । यो प्रक्रियाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस र फुट्न सक्ने ओलीदाहाल मेड नेकपाको सरकार निर्माणको वैधानिक बाटो पनि खुलाएको छ ।
यसका पछाडी धेरै विश्वसनीय आधारहरु पनि छन् : पहिलो कुरा त गत चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरी संघीय संसदमा गोरखाबाट निर्वाचित भएका हुन् बाबुराम । उनको कांग्रेससँग सम्बन्ध बिग्रने कुरा नै छैन । बरु सम्बन्ध बन्दै पो आएको छ । दोस्रो कुरा, कांग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा डिप्रेसनले मर्न थालेको र आतुर छ सत्ता भोगका लागि । छायाँसायाँ सरकार पनि बनाएर तलब भत्ताको माग पनि गरिरहेको छ । तेस्रो कुरा, ओलीदाहालको नेकपामा रहेका नेतृत्व तहकैहरु पनि जहाँ जाँदा सत्तामा आरोहण गर्न पाइन्छ, त्यसका लागि तयार छन् । चौथो कुरा, ओली र मूलतः नेकपाको सरकार विदेशीले त मन नै पराएका छैनन्, त्यसमा पनि नेपाली जनता नै वाक्क भैसकेका छन् । यो नेपालीहरुका लागि कौछाको माला साबित भइसकेको छ ।
पाँचौं र निर्णायक कुरा, ओली दाहाल लगायतका नेकपाका सत्ताधारी नेताहरु र सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खुल्लमखुल्ला धज्जी उडाएर अमेरिकी लबीमा छिरेपछि असन्तुष्ट भारत, चीन र युरोप आदिले सकिएछ भने यसैमा आफ्ना मान्छेहरु राखेर सरकार निर्माण गरिदिने नसकिएमा नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो अख्तियार गर्ने मुडमा छन् ।
छैठौं कुरा, आजभोलिका दिनहरुमा अमेरिका भारतको अलि केही चर्को प्रेसरमा परेको छ । ‘हकवाला’ अमेरिकाले आफूलाई दाबी गरे पनि ‘चकवाला’ भारतले अमेरिकालाई केही चर्कै पेलेकै छ । भारतले उस्तै परे अर्को सत्ता समीकरणको अभ्यासको थालनी गर्ने चेतावनी दिएपछि अमेरिका भारतसँग नेपालको मामलामा चीन विरुद्धमा केही नयाँ सत्तासमीकरण गर्न तयार रहेको देखिएको छ । त्यो भनेको ओलीदाहालको सन्ध्याकालीन घण्टी बजेकै हो । यो भनेको ओलीदाहाल चीन पक्षधर हुन् वा हुन सक्छन् भन्ने भ्रम चाही पर्न जान हुँदैन ।
सातौं कुरा, सरकार र सरकारी दलले अमेरिकासमक्ष घुँडा टेकेपछि विदेशी प्रेसर (चीन, भारत, युरोप र अन्यको पनि ) न त ओलीलाई न त दाहाललाई खेपसिक्नु भइरहेको छ । यिनीहरु त्यसै कुर्सी छोडेर भाग्लान् झैं भइसकेको छ ।
यसैले अब अमेरिका–भारत मिलेर यी दुबैको स्वार्थमा, तर तत्काल केही थोरै भए पनि चीनका विरुद्धमा, हुने गरी सरकार अदलीबदली त गरिदिने वातावरण बनाउँदै लगेका कुरा सत्य हो । यस अघि सरकारको जोडघटाउ र मन्त्री फेरबदलमा लागेर अन्तिम टुंगोमा पुगेका ओलीदाहाल त्यसै रोकिएका होइनन् ।
यसैलाई मध्यनजर गरेर नेकपा जस्तै पार्टीमा २ अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरी डा. भट्टराईले संघीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने र यादवले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता गर्ने कुरा मिलाएका छन् । । यहाँ संघीय परिषद सत्ताको नजिक रहने कुरालाई विर्सन हुँदैन ।
हालका दिनमा नेपालमा दलाल शासनव्यवस्था कायम हुन गएकाले देशमा चल्ने सत्ता समीकरणको अन्तरविरोध र यसको हल वा निदान नेपालका संसदीय राजनीतिक दलहरु वा नेपाली जनताले होइन, विदेशी शक्तिहरुले गर्ने र गरिरहेको कुरामा आशंका लिइरहनु पर्दैन ।
मूलबाटोका लागि शाहले गरेको राजनीतिक टिप्पणी ।